यी ४ स्टार भारतीय क्रिकेटर : जसले सर्वाधिक अर्धशतक बनाए
By क्रिकेट पाटी	 On Mar 17, 2021
काठमाडौं : भारतीय क्रिकेट टिमका कयौँ खेलाडी महान खेलाडीको रुपमा चिनिएका छन् । भारतीय टिमका लागि एक भन्दा एक महान खेलाडीले खेलि सकेका छन् । कयौँ यस्ता खेलाडी भएका छन् । जसले विश्व क्रिकेटमा आफ्नो राज जमाएका छन् ।
भारतीय खेलाडीले कयौँ विश्व कीर्तिमान आफ्नो नाममा गरेका छन् र गर्दै गइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक र अर्धशतकको मामलामा भारतीय खेलाडी धेरै अगाडि रहेका छन् । आज हामी यस्ता चार भारतीय खेलाडीको बारेमा चर्चा गर्दै छौँ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भारतका लागि सबैभन्दा बढी अर्धशतक बनाएका छन् ।
१. सचिन तेन्दुल्कर : सूचीको शीर्ष स्थानमा पूर्व महान खेलाडी सचिन तेन्दुल्करको नाम आउँच । उनी क्रिकेट जगतका भगवान भनेर पनि चिनिन्छन् । सचिन अन्तर्राष्ट्रय क्रिकेटमा सबैभन्दा बढी अर्धशतक लगाउने भारतीय खेलाडी हुन् ।
सचिनले आफ्नो करियरमा ७ सय ८२ अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेलेका छन् । जसमा उनले १ सय ६४ अर्धशतक आफ्नो नाममा गरेका छन् । सचिनको नाममा कयौँ खतरनाक कीर्तिमान रहेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रि क्रिकेटमा १ सय शतक पनि लगाएका छन् ।
२. राहुल द्रविड : पूर्व भारतीय महान खेलाडी राहुल द्रविड यो सूचीको दोस्रो स्थानमा छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा भन्दा बढी अर्धशतक लगाउने दोस्रो भारतीय खेलाडी हुन् ।
राहुलले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा ५ सय ९९ म्याच खेलेका छन् । जसमा उनले १ सय ४५ अर्धशतक आफ्नो नाममा गरेका छन् । राहुलले वानडे क्रिकेटमा ८३ र टेष्ट क्रिकेटमा ६३ अर्धशतक बनाएका छन् । उनले भारतका लागि एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० म्याच खेलेका छन् । जसमा उनले ३१ रन बनाएका छन् ।
३. विराट कोहली : सूचीको तेस्रो स्थानमा भारतीय टिमका वर्तमान कप्तान विराट कोहलीको नाम आउँछ । उनी अहिलेका महान ब्याट्सम्यान हुन् । कोहली लगातार ठूला ठूला कीर्तिमान आफ्नो नाममा गर्दैै गएका छन् ।
विराटले आजसम्म ४ सय ७७ अन्तर्राष्ट्रय म्याच खेलेका छन् । जसमा उनले १ सय १२ अन्तर्राष्ट्रि अर्धशतक लगाएका छन् । यो सबैमा कोहलीले वानडेमा ६०, टेष्ट क्रिकेटमा २५ र टी-२० क्रिकेटमा २७ अर्धशतक लगाएका छन् ।
४. सौरभ गांगुली : यो सूचीको चौथो स्थानमा पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुलीको नाम आउँछ । उनी विश्वका महान खेलाडी मध्येका एक हुन् । गांगुलीले आफ्नो करियरमा ५ सय २३ अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेलेका छन् । जसमा उनले १ सय ७ अर्धशतक लगाएका छन् ।
सौरभले वानडे क्रिकेटमा ७२ र टेष्ट क्रिकेटमा ३५ अर्धशतक लगाएका छन् । उनले भारतका लागि एकपनि अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० म्याच खेलेका छैनन् ।
राहुल द्रविडविराट कोहलीसचिन तेन्दुल्करसोरव गांगुली